हलिउडकी चर्चित नायिकाले नै ३ वटा ‘स्तन’ शो गरेपछि…! – Gorkhali Dainik
हलिउडकी चर्चित नायिकाले नै ३ वटा ‘स्तन’ शो गरेपछि…!
October 5, 2020 234
उनले हालै भएको एक फिल्मी समारोहमा आफ्ना ३ वटा छाती दुनियालाई देखाइन् । तिनवटा छाती साँच्चीकै हुन् की भन्ने भान पर्छ । यद्यपि उनले आफ्ना छातीका टु प्पा सानो कपडाको त्यान्द्रोले ढाकेकी थिइन् । तिनैवटा छाती ठ्याक्कै उस्ताउस्तै छन् त्यसैले बिचको छाती बनाबटी हो की भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
उनले यतिधेरै भार छातिमा बोकेर कसरी जिवन कटाएकी होलिन् भनेर तपाइँहरुमा दया पनि जाग्ला । तर, यी नायिका काे ३ मध्ये १ छाती बनाबटी हो ।
उनले छातिको बिचमा कृत्रिम छाती जडान गरेकी हुन् । वास्तवमा हलिउड फिल्म ‘टोटल रिकल’ मा तिन छाती भएकी महिलाको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी कटलिनको बिचको छाती बनाबटी हो ।
Prev११ वार्षिया बालिका रुदै बुबा खोज्दै हिड्छिन….
Nextमहावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले बनायो आईसीयूका संक्रमितका लागि स्वास्थ्य सामग्री…….!
‘राजाको ठाउँमा अहिले तेस्तै नयाँ मान्छे आएर देश लुटिरहेको छ’… – सांसद झाँक्री
श्रीमानसँगै होटलमा बसेकी महिलाको शव फेला